पहिलो वैवाहिक सम्बन्धलाई पूर्णबिराम दिएको ठ्याक्कै ८ वर्षपछि अभिनेत्री प्रियंका कार्कीले अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीसँग बिहे गरिन् । अघिल्लो वर्षको फागुनमा बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रेस्टुरेन्टमा नजिकका साथीभाइ र आफ्ना आफन्तको उपस्थितिमा आयुष्मानले प्रियंकालाई सिन्दुर लगाए । सिन्दुर लगाइरहेका बेला आयुष्मानले प्रियंकासँग यो जुनी सँगै काट्ने कसम खाए ।
२०७६ फागुन १६ गते वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको यो जोडीको बिहे भएको ९ महिना पुगेको छ । यदि कुनै विवाहित पुरुष–महिलाले चाहेको खण्डमा बच्चा जन्मिने बेला भइसकेको छ । तर, बिहे भएको ९ महिनासम्म त्यस्तो कुनै संकेत देखिएको छैन । यो जोडीले सन्तान जन्माउने कुनै संकेत दिएका छैनन् । प्रियंका भन्छिन्, ‘यस विषयमा अहिले हामी दुईबीच कुरा भएको छैन । कुनै निर्णय पनि भएको छैन । यो नितान्त व्यक्तिगत जीवनसँग सम्बन्धित भएकाले खासै केही बोल्न मन लागेन ।’
आयुष्मानले भने यस विषयमा केही खुलेर बोलेका छन् । ‘मेरो बिहेअघि र पछिको व्यक्तिगत जीवन त उस्तै छ । पारिवारिक जीवनमा केही चेञ्जिङ आएको त पक्कै हो’, आयुष्मान भन्छन्, ‘बिहे भएपनि म आफ्नो काममा व्यस्त छु । ऊ आफ्नो काममा व्यस्त छ ।’
सन्तानको विषयमा अहिले कुनै योजना नरहेको आयुष्मानले प्रतिक्रिया दिए । व्यावसायिक कामहरूको शिलशिलाले सन्तान उत्पादनको विषयमा आफूहरू निर्णयमा नपुगेको आयुष्मानको प्रतिक्रिया छ ।
९ महिनासम्मको पारिवारिक स्थिति कसरी चल्यो ? कहिलेकाहीँ खटपट हुन्छ ? कि हुन्न ? झगडा हुन्छ होला ? किचकिच भएर केही दिन बोलचाल ठप्प भयो ९ महिनाको अन्तरमा ? आयुष्मान यस्ता प्रश्नको जवाफमा हाँस्दै प्रतिक्रिया दिन्छन्, ‘हरेक श्रीमान–श्रीमतीमा ठाकठुक हुनु स्वाभाविकै हो । तर, हामीहरूको खटपट बोलचाल बन्द हुने गरी चाहिँ भएको छैन ।’
निःसन्देह, उनीहरूको सम्बन्ध निकै राम्रो छ भन्नका लागि उनीहरूले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालले पनि बताइरहेको हुन्छ । अहिले पनि उनीहरूको सम्बन्ध भर्खरै शुरू भएको प्रेम जस्तो सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ ।
बिहेपछि ट्रोलबाट छुटकारा !
भर्खरै प्रेमको बिरुवा झांगिँदै थियो । यो जोडीका तस्वीर र विभिन्न विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा निकै ट्रोल बने । आयुष्मानलाई चुसेको आँप बनाए, प्रियंकाको अघिल्लो श्रीमानसँगका तस्वीर र अन्तर्वार्ता सार्वजनिक गरेर जिस्काइरहे फ्यानहरूले । तर, न ट्रोलले उनीहरूको प्रेममा असर गर्‍यो, न कुनै गसिपले । तर, बिहे भएपछि भने उनीहरूलाई ट्रोलमा कमै मात्रामा देख्न पाइएको छ । तथापि, उनीहरूका स्ट्याटस र तस्वीरहरूमा नकारात्मक कमेन्ट, प्रतिक्रिया आउन भने अझै छाडेको छैन ।
कसरी जोडियो सम्बन्ध ?
आयुष्मान–प्रियंकाको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा थाहा हुनुअघि यो जोडीको प्रेमबारे गसिपका रूपमा बजारमा निकै हल्ला थियो । प्रियंकालाई ६ वर्षले कान्छा केटाले ताकेको धेरैले पत्याएनन् । एउटा नाम चलेको सेलिब्रेटीले जस्तोसुकै युवा छान्न सक्थ्यो, तर प्रियंकाले भाइ उमेरको आयुष्मानलाई सुटुक्क मन दिएको धेरैले पत्तै पाउन सकेनन् ।
कतिपय मिडियाले दाबीका साथ यो जोडी बिहे गर्दैछ भनेर ठोकुवा समेत गरेको थिए । तर, आयुष्मानले हामी दुवै एकअर्काका अति मिलनसार साथी हौं भन्दै यो विषयलाई अन्त मोड्थे । प्रियंकाले पनि जो सँग बोल्यो त्यसैसँग सम्बन्ध छ भन्न मिल्छ ? भन्दै उल्टै प्रश्न तेर्स्याउँथिन् । प्रेममा रहेका बेला हर कोहीले यस्ता विषयलाई अन्त मोड्न अनेक बहना खोज्छन्, यो सामान्य कुरा पनि थियो ।
आयुष्मान–प्रियंकाले पनि विभिन्न बहाना जुटाउँदै यो विषयलाई अन्त मोड्थे । तर, प्रेम न हो कतै न कतैबाट त फुत्किहाल्छ । उनीहरूको पनि प्रेम जीवनमा कहिले अंगालोमा बेरिएका तस्वीर बाहिर आए, त कहिले डेटिङमा गएका तस्वीर सार्वजनिक भए । कहिले अवार्ड समारोहमा चुम्माचाटी गरेका तस्वीर बाहिर आए, कहिले क्लबमा जाँदा आयुष्मान दारुले लट्ठ भएर प्रियंकाले हातमा जुत्ता समातेर निस्किएको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा बाहिर आए । त्यसपछि उनीहरूले यो प्रेमलाई अन्ततः स्वीकार्न बाध्य भए । त्यसैको छनक स्वरूप प्रियंकालाई उनको जन्मदिनमा आयुष्मानले टाँगामा राखेर शहर परिक्रमा नै गराइदिए ।
बैंकर रविना देशराजका जेठा छोरा आयुष्मान प्रियंकाभन्दा ६ वर्ष कान्छा छन् । प्रियंकाको करिअर ओरालो लागिरहेको थियो । आयुष्मान चलचित्र क्षेत्रमा बामे सर्दै थिए, तर प्रेमको जालोमा फसे । खासै मिडियामा स्थान नपाइरहेका बेला तत्कालीन हिट अभिनेत्रीको प्रेम प्रसंगमा जोडिएपछि आयुष्मान पनि दिनदिनै मिडियामा छाइरहे ।
प्रियंकाको सिफारिशमा केही म्युजिक भिडियोहरूमा स्थान पाए । तथापि, उनको चलचित्र यात्राले कुनै गति लिएन । प्रियंकाको चलचित्र यात्रा पनि खासै आशालाग्दो नभएका बेला उनीहरू धुमधामका साथ बिहे गरेका हुन् ।
कोरोना महामारीले गर्दा उनीहरूले हनिमून घरमै मनाए । सधैँजसो विदेशका विभिन्न स्थानमा घुम्ने प्रियंका–आयुष्मानलाई विदेश टुरमा समेत कोरोना बाधक बनेको छ । प्रियंका थप्छिन्, ‘कोरोना महामारी सकिएपछि घुम्न जाने योजना छ । बिहे भएपछि राम्रोसँग घुम्न पाइएको छैन ।’
'म सेक्सी हुँदा तपाईंलाई के समस्या ?'
मुम्बईमा वरुणको भव्य बिहे पार्टी
गायक शिव परियारको फेसवुक ह्याक प्रयास